Fanohanana teknolojia | Shijiazhuang Neming Import & Export Co., Ltd.
Ny palitaontsika softshell dia vita amin'ny lamba 3in1 avo lenta.
Ny lamba manenjana ivelany dia vita DWR, afovoany amin'ny membrane TPU, anaty volony amin'ny volon'ondry bitika, ny lamba dia tantera-drano, azo atsofoka ary mifoka rivotra, mitazona anao ho maina sy mahazo aina amin'ny adinao ivelany rehetra. Ny zava-bita tsy tantera-drano dia mitazona ny rano hivoaka raha toa kosa ka mamela ny hamandoana anaty mandositra ny rafi-pitondran-tena hydrophilic. Ny lamba ivelany DWR dia manamafy ny kalitaon'ny tantera-drano ary manampy ny rano hihazakazaka sady manampy ny akanjo azo tanterahina.
Izy io dia mety amin'ny fitsangatsanganana an-tongotra, fitobiana, famonoana na amin'ny toerana hafa.
Inona no atao hoe akanjo mihazakazaka?
Ny lobaka mihazakazaka dia matetika vita amin'ny lamba fampisehoana ary natao hahitana fampiononana fatratra rehefa mihazakazaka. Karazan-karazany maro no amboarina mba hahitana toetr'andro, karazana hazakazaka ary safidin'ny tena manokana.
Ny mpihazakazaka sasany dia manao T-shirt landihazo mahazatra, mihazakazaka, indrindra raha mpihazakazaka tsindraindray izy ireo na vao manomboka amin'ny fanatanjahantena. Ny lobaka mihazakazaka dia manana tombony betsaka noho ny T-shirt, misy manasatra ny hatsembohana tsy ho an'ny hoditra, maina haingana, anti-UV, manitra.
Ny ankabeazan'ny lobaka mihazakazaka izay natao mandritra ny volana fahavaratra sy ny hafanana mafana dia misy kofehin-kenatra sy mampihena ny fofona. Ny sasany koa manana fiarovana UV voaorina. Ny lamba izay misy kofehy volafotsy na seramika dia manome fananana manohitra ny hatsembohana sy manohitra fofona. Ny lamba antimikroba dia natao ihany koa mba hampihenana ny fofona.
Ny tanjona lehibe amin'ny akanjo lava amin'ny ririnina dia ny ho mafana sy maivana. Matetika ampiasaina amin'ny fitaovana synthetic, toy ny polyester sy ny fibre blends. Misy ihany koa ny lobaka mihazakazaka amin'ny ririnina izay misy saron-doha na lavaka ankihiben-tànana amin'ny tanany mba handrakofana ampahany ny tanana. Amin'ny toetr'andro mangatsiaka indrindra dia tsara kokoa ny miakanjo sosona, ao anatin'izany ny akanjo mihazakazaka sy palitao maivana vita amin'ny nylon na fitaovana mahatohitra rivotra.
Ny lobaka mihazakazaka an'ny lehilahy sy ny vehivavy dia azo atao amin'ny akanjo lava, lava tanana, tanany ary tanky. Ny akanjon'ireto akanjo ireto dia miainga hatrany amin'ny lobaka mametaka, izay mifanentana tsara. Ny fomban'ny vozona dia misy vozona maneso ho an'ny hafanana fanampiny, sy ny fomba ekipazy ary v-vozony. Ny fiasa hafa hita indraindray ao anaty lobaka mihazakazaka dia misy paosy misy zipper sy tadiny miafina hitazomana ny tariby finday.
Inona no atao hoe lamba mando hamandoana?
Wicking, enti-milaza ny fahafahan'io lamba io hamindra ny hamandoana hiala amin'ny vatana sy ilay lamba mihitsy; ny fahaizana miaina sy mitazona ny hoditry ny mpampiasa ho maina amin'ny hatsembohana.
Wicking lamba, dia midika fa ny lamba dia misy capillaries kely ao izay ampy hamelana ny hamandoana, toy ny hatsembohana, esorina amin'ny hoditra ary mivoaka sy mivoaka. Izy io dia afaka mitazona ny vatana ho maina sy hangatsiaka na dia mifintina amin'ny fikelezana aina aza ilay olona.
Ny lamba avo lenta, ara-teknika ary miaina, hajanonao ho maina sy hahazo aina mandritra ny andro. Aza manahy ny hatsembohana intsony.
Ny lamba wicking dia ampiasaina amin'ny hetsika rehetra any ivelany manomboka amin'ny fihazakazahana ka hatrany amin'ny fitsangantsanganana ary ampiasaina amin'ny vanim-potoana rehetra fa mahomby indrindra amin'ny maripana mangatsiaka kokoa. Afaka miasa ho insulator tsara izy io, amin'ny resaka hafanana koa. Mety ho an'ny fanatanjahan-tena, fitafiana fampiofanana, sosona fototra, akanjo atletika sns.
Manasa lanezy: ny fomba hanomezana ny lobanao T ilay fijery efa tonta
Ny T-Shirt tsara indrindra dia tsy ireo vaovao, fa ireo no tonta sy malefaka amin'ny fanasana maro. Manana taona kely amin'izy ireo izy ireo. Ahoana no ahazoana T shirt antitra toy izany?
Ity ambany ity ny fomba fanasan-damba amin'ny lanezy:
1, atsobohy ao anaty permanganate potassium ny baolina fingotra maina
2, Atsipazo maina ny T shirt miaraka amin'ny baolina fingotra ao anaty varingarin'ny rotary manokana. Mandritra io dingana io, ny permanganate potasioma dia hanaloka ny lamba amin'ny toerana ifandraisana
3, zahao ireo vokany fanasana
4, Sasao ao anaty rano
5, Fanamafisana amin'ny asidra oxalic
6, Sasao ao anaty rano
7, asio «softener»
Avy eo ianao dia afaka mahazo ilay akanjo volonao t aloha.
Aza adino, tsy maintsy ataon'ny orinasa fanasan-damba matihanina izany, ary mandritra ny fanjairana dia mila mampiasa fanjaitra mety tsara ianao ary manova ny fanjaitra ara-potoana. Raha tsy izany dia ahiana hanimba ny akanjonao T amin'ny fanasana.